Harbour Inn-Indawo yethu eyonwabileyo - I-Airbnb
Harbour Inn-Indawo yethu eyonwabileyo
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguHarbor Inn
UHarbor Inn unezimvo eziyi-70 zezinye iindawo.
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uHarbor Inn iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Wamkelekile kwiHeritage Harbour Resort kwiLizwe elihle i-Starved Rock Country. Indawo yethu eyonwabileyo yindlwana efanelekileyo yabantu ababini okanye ukuya kutsho ezintandathu.
Indawo yethu eyonwabileyo yindlwana efanelekileyo yabantu ababini okanye ukuya kutsho ezintandathu. Le ndlu intle inegumbi lokulala elinobukhulu obungukumkanikazi, igumbi eliphezulu elineebhedi ezi-2 ezingamawele kunye nokumkanikazi okhupha isofa kule ndlu intle ikumgangatho omnye. I-sofa yokukhupha ivumela iindwendwe ezimbini ezongezelelweyo ukuba zijoyine kwindawo yokuphumla. Kukho iimpahla ezitofotofo kulo lonke ikhaya, i-veranda eboniswe kwiveranda enombono wangaphambili wamanzi, isantya esiphezulu se-intanethi, kunye nezinye izinto ezininzi ezintle.
Indawo yethu eyonwabileyo ikwisiphelo esisentshona seCottages eHerons Landing ebumelwaneni, ngaphantsi komzuzu ukuhamba umgama kwindawo yomlilo yoluntu kunye nokufikelela emanzini. Izitebhisi eziya emazantsi e-cottage zikhokelela ezantsi kumlambo ohambahambayo odibanisa ne-harbor walk, apho unokuthatha khona imbono ye-panoramic ye-Illinois Waterway kunye ne-Harbour.
Le ndlu inkulu ine-HDTV ene-DVD player kwigumbi lokuhlala elitofotofo. Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle kwaye inayo yonke into oya kuyidinga kwizitya, i-cookware, i-toaster, i-microwave, ifriji, imbiza yekofu, nokunye okuninzi! Zisa nje ukutya kwakho kunye neziqholo kwaye Indawo yethu eyonwabileyo iya kuba nako konke ukutya osithandayo!
Iveranda egqunyiweyo, evaliweyo, engaphambili enezihlalo zangaphandle ivulela indawo eluhlaza ngengca ukuze intsapho ihlanganisane.
Le ndlu ifanele ukuhlala ibonelela ngokuhombisa okumnandi kunye nokuthokomeleyo elunxwemeni, ikhitshi eligcweleyo, indawo ephezulu eyonwabisayo kunye nezinto ezininzi eziluncedo. Ukuba ujonge intuthuzelo elula kunye noxolo, uya kuthanda ukuhlala kwindawo yethu eyonwabileyo.
EBUHLENI: Iindlwana ezikwiNdawo yokuHlala yeeHerons
Ibhedi yoku-1: Kumkanikazi
UKUBHEDA 2: 2X iwele kwigumbi eliphezulu
Ibhedi eyongeziweyo: I-Sofa Sleeper
UMDLALI weDVD w/ Iimuvi
UMGODI WOMLILO: Uluntu
Iintsuku eziyi-7 e Ottawa
Yonwabela zonke izinto eziluncedo ezikufutshane kunye nezinto ezenziwayo ezibandakanya ukuqubha, ulwandle, imingxuma yomlilo, i-kayaking, ukubhabha, ukukhwela intaba / ukuhamba, iindlela zokuhamba ngebhayisekile, utywala obuchwephesha kunye nokungcamla iwayini, i-zip line, ukujula emanzini, ukuvuthela iglasi, nokunye okuninzi, singasathethi ke. Ulonwabo uya kuba nalo uhambahamba nje eZibukweni kwaye wonwabele ibha yetiki, ulwandle kunye nendawo yokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Harbor Inn
Silapha ngenxa yakho ukuba uyasidinga.
I-ofisi yolawulo ivula 9 am - 5 pm Ngelanga - NgoLwesine, ivula kude kube 6 pm Fri/Sat.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ottawa